Otu esi emeputa ihe na-enweghị ime ya ihe ọ bụla | Site na Linux
Otu esi emeputa ihe na-enweghị ime ya ma ọlị
mgbochi | | Ọdịdị / Nhazi, Imebe
Fewbọchị ole na ole gara aga Apple webatara ihe osise eserese ogologo oge nke sistemụ arụmọrụ ya na enweghị m ike ịchọta okwu karịa "jọrọ njọ" iji kọwaa ya nkenke. Ugbu a, na mpụga nke ubi nke mmeghachi omume mbụ, anyị enweghị ọtụtụ ihe karịa ndakpọ olileanya iji zọpụta: iOS 7 bụ otu usoro ahụ dị ka mgbe niile, mana ya na palette agba ndị ọzọ na-acha odo odo, nghọta nke na-agbasa ozi ọma na ọ bụghị nke na-agba ume. .
Ọ bụ ezie na Apple abụghị isiokwu maka oghere a, ihe omume a nwere ike ịbụ ihe atụ nke mkpebi mmezi na-adịghị mma na isi okwu zuru oke: ihu ndị ọrụ yana otu esi emelite ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ka anyị hapụ okwu Apple ahụ nwa oge, mana ọ bụghị tupu anyị ekele ụlọ ọrụ a maka iwepụ ihe fọduru nke ọchịchọ maka otu ngwaọrụ ha n'uche anyị.
1 Ọdịdị nkịtị
2 Mfe imewe
3 Emepụta ihe na-enweghị ihe ọhụụ
"Naa bụ ihe ọzọ". Nkebi okwu a, ikekwe ugboro ugboro site na onye owu na-ama ihe na-eme n'akụkụ ọzọ nke ụwa; ọ bụ ụkpụrụ bụ isi nke na-akwagide usoro nke ugbu a maka imepụta ihe dị mfe ma gbanwee nke ọma maka iji ya arụ ọrụ. Otú ọ dị, echiche a yiri ka ọ dị mfe abanyela n'ime mgbalị iji mee ka ihe niile ghọọ ihe ngosi dị mfe ma dị mfe nke echiche ndị adịla mbụ.
M na-akọwa. Ọ bụ ezie na imepụta ihe anụ ahụ bụ usoro jikọtara ya na eziokwu na njedebe ya, imepụta ngwa kọmputa nwere oke ya na echiche nke e bu n'uche ya. A na-enwekarị ohere imeziwanye, agbanyeghị ọ nwere ike dị ebube.
Ka anyị chee echiche banyere ngwa ngwa: Google. Tụle ọdịdị nke ọrụ gị bụ nnukwu nzọụkwụ na-agbanwe agbanwe nke na-abara onye ọrụ uru ozugbo site na izere mkpa ịmịpụta echiche ndị a na-eme ugboro ugboro na ikpo okwu gị. Ọ bụ ya mere ọhụụ ọhụụ ọhụrụ Google+ ji akụda mmụọ: ịghagharị wiil ahụ abaghị uru.
Enweghị nkwekọrịta. Enweghị ịta ahụhụ. Iwu nke egwuregwu ahụ gbanwere ngwa ngwa. Na ihe niile a na-esonyere nkọwa ndị na-atọ ọchị dị ka "mgbịrịgba obi ụtọ" na ọkwa ma ọ bụ ịpịgharị na-enweghị isi nke ụlọ elu ahụ.
La Linus Torvalds iwe O ziri ezi, ma o nwere ihe na-ezighi ezi. Nsogbu a abughi ederede ederede, ọ bụ echiche nke Google na-atụ aro. Egwu.
Ijigide nkwenye ndị dị mma adịghị mma ma ọ dị nwute, ọ ga-abụ ihe anyị ga-ahụ ugboro ugboro n'oge a dị larịị ma dịkwa mfe nke na-aga n'ihu na-agbanwe kpamkpam ihe ọ bụla n'ụzọ anyị si eji ngwa anyị.
Na ole clicks ị nwere ike ide ozi-e? Otu ụzọ dị mma nwere ike isi mee ka anyị mepee mmemme ahụ, na ịpị bọtịnụ "Ọhụrụ" na mgbe anyị dechara ya ma nyochaa nkọwa nke ndị nnata na faịlụ ndị agbakwunyere; ruo mgbe na-enye ikpeazụ click na «Send». Ederede usoro atọ dị ka ihe ezi uche dị na ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị.
Ka anyị chee echiche banyere ọtụtụ ọrụ a ga-eweta na arụmọrụ yiri nke ahụ yana otu mmemme ga-esi rụọ ọrụ ndị a ga-adị ka ya; na-enweghị ọbụna na-eche nke a "ewepụghị" udi maka ha. Enwere ụzọ ka mma iji eme ihe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ siri ike ịchọta. Ihe omuma atu magburu onwe ya bu uzo 10 × 10, nke enwere ike ichikota dika ichota echiche a ugboro iri, di iche na oge obula, na iri okpukpu iri maka echiche mmeri. Usoro na-agwụ ike, mana ya na owuwe ihe ubi bara ezigbo uru.
Otu ihe atụ ọzọ: olee otu anyị ga - esi meziwanye ihe na - enweghị isi, dịka ige egwu? KDE nwere n'echiche m otu n'ime ndị na - egwu ihe ọdịyo kacha mma n'ebe ahụ, mana ọ nwere ohere maka mmelite, dịka anyị ahụla na ọ nwere ihe niile. Otu nsogbu zuru ebe niile bụ ozi ugboro ugboro. Ka anyị lelee nseta ihuenyo na-esonụ:
A na-emegharị aha egwu ahụ ugboro ise na ndabara ndabara. Na aha windo ahụ, n’elu oganihu oganihu, na ndepụta ọkpụkpọ na na “Context” na “Lyrics” apụl (nke anaghị egosiputa nke ikpeazụ n’ihi na Amarok ahụghị egwu abụ a), na-agụtaghị ọkwa nke gosipụtara mgbe track amalite. Achọrọ m iche na naanị otu oge ezuola, mana nke a abụghị eziokwu.
Gbaso usoro ọhụrụ nke wepu aha na windo - nke gbatịrị na desktọọpụ na-akwụghị ụgwọ, dị ka Pantheon site na elementrị OS ma ọ bụ GNOME, yana ndị nwere ya, dịka Mac OS X - opekata mpe otu nzaghachi nke aha egwu ahụ.
Ogwe ogwe aka - nke m na - eji - ewepụ anyị ọzọ, n'ikpeazụ, mgbanwe nke apụl ga - ewepụ ọbụna otu ọzọ.
Typesdị nkọwa ndị a dị mfe iji dozie ma ha anaghị eweta esemokwu dị oke mkpa iji jiri mmemme. Mana enwere ọtụtụ ihe atụ nke nsogbu ndị dị oke njọ, ọkachasị na ngwa mkpanaka.
Emepụta ihe na-enweghị ihe ọhụụ
KDE nwere nnukwu ohere iji melite nke ọma na nkwupụta eserese eserese. Nnukwu ihe ngosi eserese ga-eche ihe ịma aka nke idobe ụdị KDE anya na nhazi ọhụrụ; mana enwere m ntụkwasị obi na ndị na-akwado ọrụ a.
Oxygen chọrọ mmezi ihu, mana ọ bụghị ezigbo njọ ma were ya dị obere ga-efu ohere dịka Apple mere. Ebumnuche ahụ abụghị ịtụgharị KDE n'ime akwa ọcha nke nwere mkpụrụedemede mara mma, mana iji mepụta ọhụụ ọhụụ na ihu ọma maka anyị, ndị ọrụ ya.
Anyị nwere ike ịrịọ maka ihe ndị dị mfe. Mpempe akwụkwọ na-acha odo odo karị na akara ngosi iji wepụ ihere nke iko ahụ ha dọrọ kemgbe ogologo oge. Mee ka ihe dị mfe wijetị nke Oxygen n'emeghị ka ọ dị ka plastik dị ka GNOME.
Ihe a niile gụnyere nnukwu ọrụ. Mana aghaghị m isi ọnwụ na mgbanwe ndị ahụ niile ga-eme ka anyị nwee ọ happyụ dị ukwuu anaghị edozi ihe ọ bụla n'ezie. Anyị kwesịrị ịtụgharị uche n'ụzọ anyị si eji ngwa anyị taa ma wuo ihe magburu onwe ya site na ihe anyị hụrụ.
Ana m ekwu KDE n'ihi na enweela m ntụkwasị obi dị ukwuu na ọrụ ahụ. Enweela m KDE ma anaghị m ahụkwa gburugburu ebe ndị ahụ na anya ọzọ. Ọ dị m ka ya bụrụ na m ga - atụnye ụtụ karịa okwu agbamume ndị a nye ndị na - emepụta ihe, ndị nka, na ndị mmemme na - ewu ihe a kwa ụbọchị, m na - ekwu nke a nihi na ekwere m na ha ma ihe ha na - eme na ebe ha na - aga.
Ọ dịghị mkpa ịmaliteghachi wiilị. Ikwesighi agba ya ọcha na acha anụnụ anụnụ wee kwuo na ọ dị ọhụụ. Have ga-eburu wiilị ahụ emere nke ọma bụ KDE ma gbanwee ya n'ime igwe jet. Obi siri m ike na nke a ga-eme n'oge na-adịghị anya na ihuenyo m n'ihu.
Egwu enwere na nseta ihuenyo nwere ike nweta iwu na n'efu na njikọ ndị a:
Tinye n'ime by Onyeka Onwenu
Nkenke nke Bayard Russell dere.
Ọchịchị Ọchịchọ by Ndokwa Music.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Otu esi emeputa ihe na-enweghị ime ya ma ọlị
O doro anya na nke a bụ echiche zuru oke na nke onwe onye jupụtara na nghọtahie na nkwubi okwu na-ezighi ezi - ụmụ mmadụ niile tụfuru kpamkpam.
Ma ọ bụ ọ dịkarịa ala maka m.
Edemede ahụ ma ọ bụ iOS 7? Anaghị m enweta.
Ee, ihe eserese eserese na-agwakọta yana sọftụwia.
Nke ahụ bụ echiche ahụ. Echere m, Echere m na imewe ahụ dị mkpa na ngwa yana n'ụzọ ha si eji ya, ịchọta ngwọta ka mma. Nke ahụ bụ egwuregwu.
Kedu ihe ọjọọ ị tinyere ihe ahahaha
Naanị mkpesa m nwere banyere iOS bụ na ugbu a ọ dị ka ekwentị gam akporo / windo ọzọ ..., ọ ka mma karịa, mana hey, echere m na ndị mmadụ ga-eji ya ...
Banyere mwepu, ahụrụ m ọhụụ google + ọhụrụ ahụ, nsụgharị ederede, n'ihi na amaghị m, n'ihi na m na-amanye otu mkpụrụedemede na weebụsaịtị niile ..., ndị buru ibu.
Banyere kde, m ga-achọ ịmepụta echiche ọhụrụ 🙂
dị ka m gụrụ na ibe ọzọ: Android + WP8 = iOS7 xD
Ahụrụ m vidiyo nke iOS na naanị ihe a na-agbapụtaghachi nke ọ nwere bụ na o mechara mee ka bluetooth nyefee faịlụ. Ndị ọzọ, kama chetaara m gam akporo 4 (ọ bụ ihe iDroid).
Apple bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọrụ Microsoft. Naanị ihe o mere bụ nke ya bụ Apple II, ọ bụ onye edemede Steve Wozniak.
Site na nke a anyị nwere ike ikwubi na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nwere ogologo ụzọ ọ ga - aga iji meziwanye ihu ya, njiri ya na njirimara onye ọrụ.
Nke ahụ bụ ihe na-eme ka sọftụwia azụmahịa mara mma nke ukwuu, n'ihi na ebumnobi mbụ bụ ahụmịhe onye ọrụ.
Ọ bụ ezie na e mepụtara ngwanrọ na-enweghị nsogbu na ụzọ enweghị nsogbu, site na ndị mmemme afọ ofufo na oge ha n'efu, sọftụwia nwere ikike karịa nke ọma, atụmatụ, ha na-ewe ndị ọkachamara na mpaghara ọ bụla (mmemme, imewe, mmesi obi ike, ule, wdg)
Zaghachi camilo tellez
A na-eme KDE na Blender (ịkpọ aha ole na ole) n'ụzọ ọgbaghara na nke ịgba nkịtị?
Bụ na mgbe ha na-eme ka a dị mfe interface, ha otutu shit na ya…. Gnome Shell ihe atụ
Shell enweghị interface dị mfe, ọ nwere interface oyi akwa nke dị iche. Nsogbu a abụghị na ha na -eleta ma na-ehicha, nsogbu bụ na ha na-ebipụ arụmọrụ na-adịghị mma n'ihi na n'echiche ha "ha adịghị mkpa" ... ihe atụ ngwa ngwa: echiche nkewa Nautilus. Nke ahụ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Got jiri ihe nzuzu dị otú ahụ na-enweghị isi na-ekwu. Gbaghara m, mana ị jiri ihe i kwuru kụzie ọnụ.
Lee, nke mbụ ị na-ekwu na mmepe SL bụ ihe omume ntụrụndụ kama ịbụ nnukwu ọrụ ma, biko, zere.
Ihe atụ nke ihe nwere ike ịbụ ezigbo ihu na-agbasasị ebe niile na agbanyeghị na KDE kwesịrị ịka mma na nke ahụ (ha na-arụ ọrụ na ya maka ebe ọrụ plasma 5) ọ bụghị ọbụna obere ọrụ na-adịghị mma na obere atụmatụ, ọ nwere ego ọbụlagodi site na ụlọ ọrụ gọọmentị Europe.
Agaghị m ekwu ihe ọ bụla, ọ gaghị aba uru.
ọmarịcha sọftụwia azụmaahịa, ọ dị mma ma mekwaa mma ... http://www.kuro5hin.org/story/2004/2/15/71552/7795
Echere m na ọ ga-ekwu maka IOS7 mana na njedebe ọ malitere ikwu banyere gnome na KDE
Kedu ihe kpatara m ga - eji kwuo maka IOS7 dị ka blọọgụ Linux (?) M na - ekwu ...
Ekwenyere m na nyocha gị ma ọ juru m anya etu ọtụtụ ghara ijide ha.
Oge a ihe eji arụ ọrụ, akụkụ ihe osise na ahụmịhe onye ọrụ ahụ dị mkpa ma ọ bụ karịa karịa arụmọrụ nke ngwa ahụ n'onwe ya. Ee ee, nke a bụ ihe ndị mmepe na - esiri ike ịhụ ... edemede a nwere ike ịmasị gị:
Na KDE nwere nsogbu abuo. Desktọpụ ndị ọzọ agbanweela usoro ahụ nke ọma, ịkụ nzọ n'ụzọ 'ka mma' iji iji desktọọpụ, ikekwe, dị mfe ma rụpụta ihe. Amaghị m na KDE ga-atụgharị site na mpaghara ugwu ya ugbu a, anyị nwere desktọọpụ mara mma, ike, arụmọrụ na desktọọpụ nwere ike ịhazi. Olee otú ka mma ya? Mgbagwoju anya, mana echere m na ndị KDE maara ihe ha na-eme.
Ekele, nnabata nke ọma!
Agụrụ m ụbọchị ole na ole gara aga na KDE na-edegharị HIGs na ndepụta aha izipu ozi.
Otú a ka ..
Ana m akwado echiche Gerardo na, (agbanyeghị enwere m ekele maka gị) Msx, echere m na ị gaferela akara gị na echiche gị.
Ebumnuche dị ebe a, ọ bụ ezie na ejiri ụda olu nke onwe ya, kwere nghọta.
Mụ na ndị mmadụ na-alụ ọgụ mgbe niile maka ihe dịka Elementary, na n'agbanyeghị etu echiche ha siri dị oke na n'agbanyeghị etu atụmatụ ya siri dị egwu, ha na-agabiga oge ụfọdụ n'etiti ịdị mfe na arụmọrụ. Anaghị m ekwu na ọ dị njọ iwepụ nhọrọ, mana ịghara iwepụ ha, ọ bụghị iwepụ ha dịka ọmụmaatụ Gnome na Nautilus na-eme, hey, hichaa interface ahụ n'ụzọ na nhọrọ ndị ahụ ka dị maka ndị ahụ onye jiri ha mee ihe, kama ha anaghị egbochi echiche nke inwekwu mmekọrịta Ọ bụrụ na m kọwaa onwe m? Ihe omume aghaghi ibu oru, obughi ihe mara nma, n'ihi na ihe di nma karie oru, ikwesiri itule.
Ọ dị mma, elementrị bụ egwuregwu, dịkwa mma, ha na-anwa i osomi osx ..., mana o nweghi ọkara ọrụ nke ngwa na gburugburu mac ..., echere m na ha agabigala akara nke na-ekewa arụmọrụ nke aesthetics. na Ha na-nzọ naanị na aesthetics ...
Ọ dị mma, nsogbu bụ mgbe ha gafere ụzọ ahụ dị mma n'etiti ịdị ọcha na arụmọrụ… hell, ha ekwesịghị.
KDE 4.11 Beta1 dị